na fikambanam-pirenena momba ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara mikasika ny fipetrak’ity karazam-pitsaboana ity manokana, raha naneho ny heviny omaly momba ny fampiatoana dokambarotra momba izany nataon’ny minisiteran’ny serasera ho ana fikambanana iray. Tsy toy ny asa hafa rehetra fa manana ny sata mifehy azy manokana ny fitsaboana nentim-paharazana, hoy ny filohan’ny ANTM, Josephin Andriandrainarivo. Tsy ao anatin’izay sata izay ny fanaovana dokambarotra. Samy hafa kosa anefa, hoy izy, ny fanabeazana ara-pahasalamana sy fihetsika rehetra manana endrika dokambarotra. Araka ny lalàna, hoy hatrany ny fanazavany, dia azon’ny mpitsabo atao ny manatanteraka fanabeazana ara-pahasalamana amin’ny haino aman-jery ao amina faritra iray hametrahan’ny lalàna azy saingy tsy tokony hanery olona hanaraka ny fitsabony na hanjifa ny fanafody vokariny kosa ilay mpitsabo na tompon’andraikitra ara-pahasalamana.